Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny fanemorana | Ubunlog
Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny fahatarana
Ny iray amin'ireo fomba tena ilaina indrindra hanangonana ny mombamomba an'i Ubuntu na ny fomba fanaovana an-tsoratra dingana iray amin'ny Ubuntu dia amin'ny alàlan'ny pikantsary. Ny pikantsary dia zavatra manan-danja izay matetika ampiasaina kely noho izay ilaintsika rehetra, satria amin'ny tranga maro, ny pikantsary dia afaka mamaha ny olana misy eto aminay ary mangataka fanampiana amin'ny forum sy chat izahay.
Amin'ity lesona kely ity dia hampianatra anao izahay ny fomba fakana pikantsary misy fahatarana izay afaka manampy antsika hisambotra dingana sasany, fa hazavainay ihany koa ny fomba fanaovana izany amin'ny alàlan'ny terminal.
Raha te handray sary an-tsary ny sary dia tsy maintsy ataontsika aloha ilay programa, tsy azontsika atao amin'ny alàlan'ny fampifangaroana fototra. Mikaroka ao ny lisitry ny lisitry ny anarana «pikantsary» ary hiseho toy izao manaraka izao ny efijery iray:
eo amin'ity efijery ity dia mila manisy marika ny faritra tiantsika ho voasambotra isika, amin'ity tranga ity dia mila manisy marika ny safidy "sambory ny birao iray manontolo". Midina isika izao ary «misambotra amin'ny fanemorana» ary manova ny segondra tadiavintsika tara. Amin'ny ankapobeny, ny isa tsara indrindra dia 5 segondra, saingy afaka misafidy isa isika arakaraka ny filantsika.
Amin'ny tranga terminal dia azontsika atao ihany koa izany, fa ity dingana ity dia haingana sy mora kokoa noho ny sary. Voalohany dia mila mihazona terminal isika. Raha vantany vao manana io terminal io isika dia mila manatanteraka ity kaody manaraka ity:
Amin'ity tranga ity dia mila manova ny isa "5" isika amin'ny isa segondra izay tiantsika hampiasa, mety ho 5 segondra na mety 20 segondra na 10 segondra, raha mbola tadiavintsika fa segondra foana.
Ny pikantsary izay raisinay amin'ny alàlan'ity fomba ity sy ny iray hafa dia ho tahirizina ao amin'ny fampirimana sary an'ny Ubuntu.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny fahatarana
Fantatrao ve ny mandefa ilay sary nalaina tao amin'ny solaitrabe mba hametahana azy mivantana ao amin'ny vatan'ny mailaka iray, ohatra, nefa tsy mila tahirinao aloha ho rakitra?
Canonical dia namoaka sary Ubuntu 18.04.1 ho an'ny Microsoft Hyper-V